Telefeshinka mamulka Oromada oo ku baaqay in Ganacsatada Jaadka Somaalida la Laayo. | ogaden24
Telefeshinka mamulka Oromada oo ku baaqay in Ganacsatada Jaadka Somaalida la Laayo.
Warbaahinta Afka mamulka Oromada kuhadasha Gaar ahaan Telefeshinka OBN ayaa bilaabay Tabinta Barnaamijyo xambaarsan dhiilo colaadeed oo kadhan ah Ganacstada Jaadka ee kasoo jeedo Somaalida.
Barnaamijka waxaa lagu soo Qaatay Qaar kamida dadka Oromada ah ee Jaadka Beerta oo kudoodaya in Ganacsatada Somaalida kuhayaan dhibaatoyin isugu Jira, bah-dil, dhac Joogta ah, xaqiraad iyo dhibaatoyin kale.
Wariyaha Barnaamijka Tabinayay oo u muuqday mid ka Turjumayay Qorshe siyaasadeed loogu Talagalay in lagu Laayo laguna dhaco Ganacsatada Somaalida ah, ayaa is waydiiyay sababta iyada oo dhalinyaradii Oromadu Tuuran tahay ay Somaali meel Fog katimid u dhacayaan Haweenka Masaakiinta ah ee Oromada.
Barnaamijka xalay kabaxay Telefeshinka OBN ee kuhadla codka mamulka Oromada oo ahaa mid siyaasadaysan ayaa si Toosa ugu baaqay in Talaabo laga Qaado Somaalida Jaadka ka Ganacsata oo lagu sheegay inay dhiiga dhaqaalaha shacabka Oromada ku macaashaan, waxaana muuqata Halis cad oo soo wajahaysa Somaalida ka Ganacsata Jaadka oo aan laga Yaabin inay xitaa Hal maalin ah kanastaan.